DTP Service Needed - MYSTERY ZILLION
DTP Service Needed
March 2009 edited August 2010 in DTP
Anyone can offer DTP service? Pls PM me for more details.
i would like to know what kind of DTP Service do you mean? :39::39::7:
သူက online ကနေ dtp=စာစီစာရိုက်၊ ဒီဇိုင်းဆွဲ အလုပ်အပ်တာကိုလက်ခံမယ်ပြောတာ။
Adobe PageMaker မှာ font ထည့်ရင် copy & Pastတင်မရဘူး...
PageMaker မှာ ထည့်ချင်font ၀င်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦး
font ထည့်တာ copy / paste နဲ့ရပါတယ်။ Pagemaker တော့ ပိတ်ထားရမှာပါ။ font ထည့်ပီးပီဆိုမှ ပြန်ဖွင့်ပေါ့။
ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါတယ် PANSOE font Mechine Result ဆိုတဲ့ box တခုကျလာပါတယ်..font တွေရွေးကြည့်တော့လည်းအဆင်မပြေဘူး
nway2 wrote: »
adobe font manager လားဘာလား မသိဘူး မေ့နေတယ် အဲဒီဟာကို install လုပ်ပြီး font
သွင်းရင် အဆင်ပြေပါတယ်....နံမည်က adobe ?? manager ပါ ...အလယ်က မေ့နေတယ်
Adobetype Manager 4.1 can help u...
page maker ထဲက win researcher font u အသတေ ပါဠိစာလုံးတေ သုံးလိုမရလို ပါ။ဆ် ငတူတဲ့နည်လေးရင်ေဲပာပါဦး။